Eduze ne-Fundy - Indlu Yesivakashi Yezwe - I-Airbnb
Eduze ne-Fundy - Indlu Yesivakashi Yezwe
Lala kahle ebusuku ngenani elikhulu. Amakamelo endlini yezihambi e-Belleisle Bay e-Hatfield Pt. Ifaneleka njengendawo yokubaleka, eduze nendawo yewayini, izimpophoma, ukuhamba ngezinyawo okuhle, ezemidlalo zasebusika nasehlobo. Amaqembu amukelekile futhi sinekhishi elikhulu, elizimele nendawo yokudlela lapho ungazilungisela khona ukudla kwakho. Ama-backpackers kanye nabasebenzi bezinkontileka zendawo bazojabulela isimo. Sicela ufunde Incwadi Yendlu.
I-Pleasant-View bekuyi-Inn kusukela ngawo-1790. Amakamelo alula, imibhede iphindwe kabili futhi igumbi ngalinye linomfula. Esitezi ngasinye, igumbi lokugezela elihlanganyelwe elineshawa. Yakhelwe ukusebenzela ukuhweba ngezikebhe zasemfuleni futhi yanwetshelwa izisebenzi zokugaya, kwakuwuhambo losuku olusuka eSaint John lapho isikebhe sokugcina sihamba ngasekuqaleni kwawo-1940.
4.73 out of 5 stars from 149 reviews
4.73 · 149 okushiwo abanye
I-Belleisle ingenye yezindawo ezithule kakhulu eNew Brunswick. I-fiord efana ne-bay, enamagquma namapulazi asebenzayo, izimpophoma, izilwane zasendle, amathuna amadala, yonke imidlalo nemidlalo. Izinyoni ezinhle exhaphozini. Izikebhe ezinhle, izingcweti. Ama-wineries amabili ngaphakathi kwamadrayivu alula. Noma vele uhlale kuvulandi ku-rocker.
Izindawo zokudlela ezimbili ngaphakathi kohambo lwemizuzu eyi-10 kodwa zivalwa ngo-9 PM. Sicela emzileni ngaphambi kokufika njengoba kunendawo elinganiselwe yokulungiselelwa ukudla, azikho izitolo zasendaweni zokuthenga ukudla kanye nesiqandisi esilinganiselwe. Sinikeza ibhulakufesi mahhala.
Izindawo zokudlela ezimbili ngaphakathi kohambo lwemizuzu eyi-10 kodwa zivalwa ngo-9 PM. Sicela emzileni ngaphambi kokufika njengoba kunendawo elinganiselwe yokulungiselelwa ukudla…